Isimo sezulu, amandla, ukuphikelela kanye nokungaphelelwa kwemvelo kubonakala ngokucacile kumnandi ukuthi u-Aries ukhetha ngokungakhethi. Abaningi babo bangabalandeli bama-flavour classical, kepha ama-Aries akhetha amafutha ngamanothi abukhali noma ahlukene. Lokhu kubangelwa ukuthi ama-Aries - abaqeqeshi bokuphila okuthakazelisayo, agcwaliswe kakhulu, engozini kanye nenjabulo, bavame ukubonisa lezi zimfanelo ezinuneni zabo. Amandla we-Aries agcwele ama-scal sandwood kanye ne-vanilla. I-temperament enobuciko, equkethe i-ginger, i-pepper, i-bergamot, i-mandarin, igcizelelwa yi-temperament.
Umzwelo weTaurus ulawulwa yiVenus, futhi uthola iphunga eligcizelela izici eziyinhloko zothando - uphawu, ubuciko, isithunzi, ukuvumelana, ukuqonda. Ama-aromas amnandi anenhliziyo enamakhadi aphezulu we-bergamot, i-medium - jasmine ne-rose, i-base-patchouli, izovumela i-Taurus ukuzizwa ekhangayo ngokukhethekile, efanelekile ukuzwakalisa nothando. Abesifazane bangakhetha amafutha abo afanele phakathi kwalabo abaqukethe ama-flavour ylang-ylang, i-sinamoni noma i-vanilla.
I-Gemini - enye yalezi zibonakaliso, abameleli bayo abesabi ukuhlolwa ngamakha, bezama amafutha wesibindi. Yiqiniso, ekukhetheni ukunambitheka kwakho siqu, ungahamba ngesilingo nesiphambeko, kodwa kulula ukulalela nokuzwa izinkanyezi. I-Gemini yokufuna ukwazi, yokudala, enobudlelwane, batusa ukunciphisa i-perfume, okugxilwe kuzo okuzoba iphunga elimnandi lika-jasmine, i-rose noma i-lily. Kufanelekile ukunakeka iphunga ngamanothi anesipuni kanye nama-flavour ahlanzekile abonakalayo anomphumela omuhle ohlelweni lwezinzwa.
Kubantwana beNyanga, abanomzimba, abaphefumulayo, abathandanayo nabathandekayo, i-horoscope yephunga elibonisa ukubuka nokuthola iphunga eliyintandokazi phakathi kwalabo abanamanothi ahamba phambili e-jasmine - uphawu lwezimfihlakalo zenyanga nezinyanga, i-magnolia noma i-lily, kanye ne-citrus e-unobtrusive (i-grapefruit, isi-mandarin) kanye nesiphunga elimnandi, elimnandi kunobuthi. I-Watermark ngeke iphinde igcizelele futhi igcobe ngama-marine motifs. Banikeza ukuthula namandla.
Kuyadingeka kakhulu ukuba ingonyama izizwe ziphakathi kokunakwa, ukuba yinkosi yokuphila futhi zizungeze ngomoya wokuphumelela. Sukuma esixukwini futhi ubabaze ama-Lions azungezile azosiza izingoma ezihle kakhulu lapho i-rosemary, i-pine, i-melissa, i-geraniums ingu-solo. Ngalo msebenzi, kungenzeka ukuba ubhekane nemimoya enezinhlamvu ze-vanilla, i-sandalwood, i-peach. Iphunga le-exartic tsar yezimbali - ylang-ylang - linganciphisa futhi linikeze kaningi ukuntuleka ukukhuthazela.
Amantombazane amancane azizwa bephila futhi ngokuvamile ayidingi iseluleko sezinkanyezi ngamafutha afanelekayo. Bazikhethela intuitively amafutha abo, okugcizelela izimfanelo zabo ezivelele, futhi abacindezela labo abafuna ukubheka amaphutha emlingweni wabo. Njengomthetho, lezi zivunguvungu ezicebile ezingaphandle, amanothi angaphezulu ayenziwe nge-orchid, i-bergamot, i-grapefruit, i-nutmeg, ne-low emele i-hyssop, i-kayaput noma i-juniper.
Izilinganiso azidingi iphunga elizokwenza ngcono izici zabo ezinhle, zinenzuzo eyanele ngaphandle kwayo. Kodwa ukwandisa ukuzethemba, ukuzethemba, amandla kanye nenhloso yokwenza kungase kube ngosizo lwe-aromatherapy ne-perfumery, izingxenye zazo eziyoba iphunga elimnandi lezithelo ezidumile kanye nezimbali ezinezinhlawulo ezikhanyayo zephunga elimnandi lamanothi kagwayi afudumele noma izinongo. I-violin ehola phambili yamakha anjalo ingaba lemon, i-myrtle, i-vanilla, impepho, i-jasmine noma i-bergamot.
Amafutha e-Scorpio kufanele abe ukuqhubekela phambili kwawo, eveza ubulili obungenasisekelo, ukuzimela, ukuziqhenya. Lokhu kungaba nama-flavour asempumalanga ekhanyayo, ekwazi ukuhlanganisa ububele ngothando. Zizizwa zivumelana I-Scorpions izoba nama-flavour ama-alimondi, ama-citrus, i-gardenias, ahlangene kahle ne-soulful patchouli, i-musk noma imisedari. Ukuze ubhebhetheke uhlamvu lomuntu futhi ubambe izinhlanzi ezivame ukuthukuthela emphefumulweni wekhanuko, amafutha enkuni ahlanganiswe ne-vanilla azokwazi.
Ukuba nethemba elingenangqondo kanye nabanye abantu abajabule, amaSagittarians nxazonke asolwa ngamandla afanele nesifiso sokuphila. Ukuzakhela amandla ngokwabo ukuzithokozisa okufanayo kubalingisi bezinkanyezi ukucebisa ama-aromas ngokwayo ukuhlanganisa umoya ophefumulayo opholile, ukuhlwithwa kwezinkuni zasekuseni kanye ne-symphony iphunga ensimini yasehlobo. Okubalulekile kumele kube yizimbali ezivundile (i-peony, i-lily, i-lotus) ngamanothi angabonakali we-anise noma i-musk noma i-flavour ye-woody ebonakalayo.
Ekukhethweni kwamafutha eCapricorn, njengomthetho, abaqaphi. Bathemba izithandwa zabo ezithandekayo, ezivunyiwe. Ngokuvamile, iphunga-izintandokazi zazo ziyizici ezibabayo zakudala ezinemibala ecacile ye-musk, izimbali, izinkuni. Ukunciphisa izintandokazi zabo ezinhlobonhlobo i-Capricorns ingaba nokwakheka ngamanothi aphezulu e-sage, ikamela, i-eucalyptus, i-fir ne-lower-amber, i-sandalwood, i-vitivere. Into eyinhloko ukuthi ama-aromas akufanele abe ngeso lengqondo, edlalayo futhi evuselela, ukuze angahambisani nesifiso sikaCapricorns sokubukeka ehloniphekile futhi emangalisa.
Ama-Aquarians awaqapheli kakhulu ekukhethweni kwamafrimu. Bathanda ukudlala ngephunga noma bakhetha ama-flavour universal. Abesifazane bangakwazi ukukwazi ukusebenzisa i-cologne yamadoda, kuyilapho belawula ukuba babe besifazane ngokumangalisayo, ukukhanya kwamanzi okushisa. Izinkanyezi ze-Aquarius zivunyelwe ukuqhubeka zizama ngesibindi ngamakha, kodwa kungcono uma i-motifs ye-sage, i-patchouli, ikhukhamba, i-nutmeg, i-palmarosa, i-sandalwood noma i-tea tree itholakala endleleni yephunga.
Izinhlanzi ziyaziwa ngokudla kwazo, ubuhlobo nobungcweti obuthuthukile. Futhi ngo-perfumery bafuna ukuthola i-"I" yabo elimnandi. I-Perfume izoba ilungele ama-Pisces, lapho kuhlanganiswa khona ama-flavour oceanic fresh. I-Perfume, lapho iphunga elimnandi lamaPisces libona iphunga elimnandi le-wisteria, iminduze, iphunga elimnandi le-citrus, amapreaches, ama-plums kanye nemininingwane emihle ye-sandalwood, i-musk, i-amber, iyoba yi-aphrodisiac yangempela kuzo zonke izikhathi.
Yeka ukuthi izibonakaliso ezihlukahlukene zezinkanyezi ziphikisana nesibindi
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 - Owesifazane-u-Aquarius - ukusuka kuTamara Globa no-Angela Pearl
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - amawele amabili-kusukela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Amakhekhe we-chocolate, iresiphi elula kunazo zonke futhi elula
Ukukhipha okomuncu ngemva kokuya esikhathini
Ukuthola izifo ngezipikili
Abameli bomndeni: izimbulo mayelana nesahlukaniso
Ukunakekelwa kwezinwele ukuze izinwele zilula futhi zikhanyise
Kanjani masinyane ukususa i-itch kusukela kokungabi namagciwane kuya kuzimonyo?
Izithombe ezingcono kakhulu ezithethelelwe ngeSonto, 2018: ngokuhalalisela, imibhalo kanye nezinkondlo
Umngane Omncane Kakhulu - Chihuahua